Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka: Qaababka vs Dhaqannada Nadaafadda Dhaqanka
Qaboojinta Hawada Saqafka
Qalabka kuleylka ee kuleylka kuleylka
Marka ay timaado naqshadaynta qol nadiif ah, midka ugu weyn, iyo go'aanka ugu horeeya ee aad qaadanaysid ayaa ah in qolkaaga nadaafaddu uu noqon doono mid qaab dhismeed ah ama dhaqan ahaan loo dhisay. Waxaa jira faa'iidooyin iyo xaddidaad kasta oo ka mid ah xulashooyinkaan, wayna adkaan kartaa in la go'aamiyo xulashada saxda ah ee arjigaaga nadiifinta. Waa kuwan qaadashadeenna ku saabsan nadiifinta nadaafadda iyo dhismaha dhaqanka.
Gidaarka nadiifinta qaybsan iyo nidaamyada saqafka sida caadiga ah waxaa ka mid ah dhisidda sanduuqa dhismaha leh aluminium malab u dhexeeya inta u dhexeysa go'yaal dibedda bir ah. Wajiyadaha looxiga ee udhaxeeya jawiga nadiifka waxaa caadi ahaan lagu dhammeeyaa daahan nadaafadeed oo cad sida PVC waana qabow iskuxirmay jawi cimilo adag.
Guddi qaybsan Faa'iidooyinka:
1.Panels ayaa loogu talagalay inay isdhax dhigto inta lagu guda jiro rakibida si loo abuuro jawi gebi ahaanba xiran oo leh hawo baxsi / soo galid aad u yar.
Dhammaystirka goobta looma baahna. Majiraan iskudhis isku dhafan, xoqid ama rinjiyeyn.
3.Wall system system sida caadiga ah wuxuu bixiyaa taageere adag oo salka sagxadda ah, badiyaa waa meel daciif ah oo ka mid ah isku imaatinka gidaarka.
Nidaamyada saqafka-socodka ah waxay abuuri karaan meel dhexdhexaad ah oo ka sareysa meelaha wax soo saarka taasoo yareyneysa shuruudaha xiritaanka inta lagu jiro dayactirka joogtada ah.
5. Nidaamyada nadaafadda ee qaybsan badankood waxay bixiyaan ama isku dari karaan albaabbada qolka nadiifka ah iyo keydinta qalabka ee isku-duwidda berrinka. Albaabadu waxay ka muuqdaan goobta diyaarsan si loogu rakibo.
Guddi Guddi Qaybsan:
1. Maalgelinta raasamaalka hore ee sare ee nidaamyada darbiyada iyo saqafka.
Waqtiyada hogaaminta-dheer ee waqtiga naqshadeynta, been abuur iyo abuuritaan faahfaahsan oo faahfaahsan.
3. Qaybaha qaabdhismeedka ahi waa kuwo aan la qabsan karin isbedelka / isbeddelada goobta.
Qaab dhismeedka dhismuhu waa inuu noqdaa mid la taaban karo oo xambaaraya culeysyada nidaamyada saqafka-socodka ee ikhtiyaariga ah.
Dhismaha biraha lagu dhejiyo alwaaxa sida gidaarka sida 'gypsum ama fiberglass composite' gebi ahaanba waa goob lagu farsameeyay oo lagu rakibay goobta. Birta birta ah ayaa lagu cabiraa, la gooyaa, la waafajiyaa oo lagu dhejiyaa meeshii iyadoo la raacayo rakibo gidaar, isku dhafan isku dhafan, iyo dhowr joodar oo rinji ah ama dusha la dhammeeyey. Saqafka acoustical-ka ayaa lagu hakin karaa halkii lagu beddeli lahaa nooca guddiga gidaarka, oo ka kooban alwaax aluminium ah iyo marmarka saqafka qalabka kala duwan.
Bir haraaga Faa'iidooyinka:
1. Maalgashiga raasamaalka hore ee hoose ee agabyada.
Maaddooyinka ayaa sida caadiga ah si fudud loogu heli karaa in la geeyo goobta.
3. Wax ka beddelka goobta / isbeddelada sida caadiga ah si fudud oo dhakhso leh ayaa loo waafajin karaa.
4.Waxaa jira aasaas aqooneed qoto dheer oo loogu talagalay macnaha iyo qaababka dhismaha qandaraasleyaal badan.
Birta haraaga Cons:
Tayada wax soosaarka 1. waxay ku tiirsan tahay inta badan been abuurka goobta halkii laga isticmaali lahaa bey'adaha ay warshaddu maamusho.
Guddiga gypsum ee ku saleysan wax soo saarka ayaa awood u leh inuu ku soo baxo koritaanka fungus sida caaryada.
La shaqeynta alwaaxda gudiga darbiga waxay abuurayaan waxyaabo u guuri kara qalabka habka xasaasiga ah inta lagu jiro rakibida.
Kiimikada nadiifinta qolka nadiifinta 4.Harsh waxay dhaawici kartaa looxyada darbiyada iyadoo aan la helin difaac iyo taxaddar habboon.
Iyada oo ay sii kordheyso helitaanka nidaamyada noocyada qaabdhismeedka ah, caqabado badan oo la xiriira farsamooyinka soo jireenka ah ee aadka loo farsameeyay ayaa la yareeyay. Maaddaama wershaddu u dhaqaaqdo hawlgallo badan oo unugyo ah oo habka waxqabadku u socdo qaab isku mid ah, sidaas oo kale mashaariicda dhismuhu waxay u riixi karaan xuduudaha nidaamyada dhismaha nadaafad, habka ugu fudud ee dhismaha nadaafadda.
Tas-hiilaadyo soo-saar taariikhi ah ayaa loo qaabeeyey loona dhisay iyadoo la adeegsanayo qalabka dhismaha iyo qaababka soo jireenka ah. Sanadihii la soo dhaafay, Airwoods waxay aragtay kororka isticmaalka qolka nadiifinta ee qaybaha badan ee mashruuca oo ay ku jiraan wax soo saarka dawooyinka, xarumaha daryeelka caafimaadka, qalabka caafimaadka, iyo kuwo kale oo badan. Maaddaama warshaddii dhismuhu is beddeshay sidaas oo kale hay'adaha sharciyeynta oo leh rajo heer sare oo nadaafadeed ah, marin u helid iyo muuqaal laga heli karo xaruntaada iyo faham wanaagsan oo ku saabsan deegaanka la dhisay ee looga baahan yahay in lagu socodsiiyo warshad gees gees ah.
Haddii mashruucaagu ku lug leeyahay aragga joogtada ah ee maamulayaasha ama macaamiisha, wuxuu u baahan doonaa inuu noqdo dabacsanaan xagga qaabeynta qaab beddelka mustaqbalka ah, ama loo qorsheeyay inay noqoto xarunta ugu wanaagsan ee wax soosaarkaaga ama waaxdaada, markaa hirgelinta nidaamyada nadaafadda ee qaabdhismeedka ayaa ku habboon in lagu daboolo baahiyaha mashruucaaga. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, si xor ah u la xiriir maanta Airwoods! Waxaan nahay dukaanka hal-joogsi ah si aan u helno xalka nadiifinta qummanaanta. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan awoodayada nadaafadda ama si aad ugala hadasho qeexitaankaaga nadaafadda mid ka mid ah khubaradayada, nala soo xiriir ama codso tixraac maanta.
Waqtiga boostada: Jan-22-2021
Laga soo bilaabo 2007, Airwoods waxay u heellan tahay inay bixiso hvac dhameystiran, qol nadiif ah iyo xalalka daaweynta VOC ee warshadaha kala duwan. Waxaan hiigsaneynaa inaan dunida u gaarsiino tayada hawada wanaagsan ee leh wax soo saar tamarta, xalalka lafilayo, qiimaha qiimaha badan iyo adeegyo waawayn.